Qaybo bir ah oo saxan warshad shaabad leh iyo alaab-qeybiyeyaal | Ouzhan
Qalabka guud ee wax soo saarka birta ayaa ah: bir birta ah, bir bir ah, tinplate, bir gu ', naxaas iyo naxaas daawaha ah, magnesium alloy, aluminium daawaha saxan duuban, saxan duuban oo kulul, saxan galvanized, saxanka elektroolka, aluminium, birta aan lahayn, saxan naxaas ah.
Qaybo ka sameysan saxanka birta saxan birta ah ee birta ah
Guud ahaan marka la hadlayo, qalabka aasaasiga ah waxaa ka mid ah Mashiinka Shear, Mashiinka Mashiinka CNC / Laser, Plasma, Mashiinka Goynta Waterjet, Mashiinka Laabaya, iyo qalabka kaabayaasha kala duwan sida: Mashiinka Kabaxa, Mashiinka dheellitirka, Mashiinka wax baabi'inaya, Mashiinka alxanka barta, iwm Ouzhan ayaa leh kuwan oo dhammeystiran qalabka iyo khadadka wax soo saarka oo buuxa. Kuu siiyaa adiga adeegyo xirfadlayaal kuu gaar ah.
Faa'iidooyinka Ouzhan qaybo shaabbad bir ah
- Habka shaabbadda ayaa heli kara qalab shaqo oo leh qaabab isku dhafan oo ay adag tahay in lagu soo saaro habab kale, sida qaybaha qolofta khafiifka ah. Saxsanaanta cabirka qaybaha shaabad qabow waxaa damaanad qaadaya caaryada, markaa xasilloonida cabbirku way wanaagsan tahay isweydaarsiguna wuu wanaagsan yahay.
- Heerka ka faa'iideysiga maaddada sare, culeyska fudud, qalafsanaanta wanaagsan iyo xoogga sare ee shaqada, iyo isticmaalka tamarta oo hooseeya ee habka shaabadda, sidaas darteed maalgelinta geeddi-socodka ee tiro badani way hooseysaa.
- Hawlgal fudud, xoog yaraanta shaqada, fududahay in la ogaado mishiinka iyo otomaatiga.
- Qaab dhismeedka caaryada ee loo adeegsaday geeddi-socodka shaambadiisu guud ahaan wuu ka dhib badan yahay, wareegga horumarkuna wuu sii dheereeyaa maalgashiguna waa ka sarreeyaa.
Ouzhan OEM kartoo sheet sheet jediyay adeegga-Shiinaha Shanghai sheet shaabadee biraha qaybo soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, xaashida saxda ah ee saxan birta qaybo ka sameysan bir bir birta ah oo leh tayo deggan oo la isku halleyn karo ayaa lagu shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka shaabadda birta. Intaa waxaa sii dheer, alaabada lagu tuntay birta xaashida ah waxay si adag u waafajisay heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan loogu talagalay shaabadda birta iyo alaabada shaatiga loogu talagalay macaamiisheena qaaliga ah.
Meelaha arjiga ee qaybo shaabad bir ah
1. Qaybo ka mid ah gawaarida birta lagu dhejiyo birta: inta badan waxaa ka mid ah qaybaha dhismaha ee baabuurta, qaybo ka shaqeeya otomaatiga, qaybaha lathe ee baabuurta, waraha baabuurta, iwm.
2. Qaybaha elektarooniga ah ee birta lagu dhejinayo birta: inta badan waxaa ka mid ah aaladaha isku xidha, isku xirayaasha, qaybaha burushka, qalabka korontada, qaybaha laastikada, iwm.
3. Qaybo ka mid ah qalabka guryaha dhexdiisa, bir ahaan: Inta badan waxaa ku jira qaybo waaweyn oo ka mid ah qalabka guryaha, sida qaybaha tuubada elektarooniga ah ee midabka leh, iyo qaybaha qalabka guryaha ee yaryar, qaybo qaabdhismeedyo kala duwan iyo qaybo shaqaynaya.
4. Iskuxirka wareega wareega ee iskuxirka IC: inta badan waxaa kamid ah iskudhafka aaladda hogaaminta qalabka iskuxirka iyo iskuxirka iskuxirka iskuxirka, iwm.
5. Xudunta birta lagu dhejiyo birta: inta badan waxaa ku jira mashiinka taxanaha hal waji ah, xudunta mootada guryaha hal-wajiga ah, xudunta mootada cirifka midab leh, wajiga mashiinka birta magnet DC, mootada mootada warshadaha, iyo sugida xudunta u ah stator caag ah.
6. Sheet birta lagu dhejiyo birta korantada birta: inta badan waxaa ka mid ah diir-wadeyaasha qaabeeya E-qaabeeya, diirmaroorayaasha qaabeeya EI-da, diirimaadda qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka I-qaabeeya, iyo jibbaarada kale ee qalabka wax lagu beddelo.
7. baalal birta tuntay kuleylka kuleylka: inta badan waxaa ku jira baalal isweydaarsiga kuleylka warshadaha, baalalha kuleylka guriga, iyo baalalha kuleylka baabuurta.
8. Shaabad ku garaacidda birta iyo qaybo kale: inta badan waxa ku jira qaybo qalab, qaybo IT ah, acoustic iyo qaybo kamarad ah, qaybo xafiis oo casri ah, iyo qalab maalinle ah.
Maxay yihiin isticmaalka qaybaha shaabbadda birta ah
1. Qalabka shaabbadda qalabka maalinlaha ah iyo kan guriga: waxyaabaha daruuriga u ah maalin kasta sida dheryaha iyo suxuunta, saxammada, kettles, iyo qalabka guryaha sida mashiinnada dharka lagu dhaqo, qaboojiyeyaasha, qaboojiyeyaasha, iyo kafeeyaasha bariiska;
2. Qaybaha shaabadda birta ah ee warshadaha: qolof jiifka qalabka, birta xaashida gawaarida iyo qaybaha mashiinka injineernimada;
3. Shaabadaynta qalabka qaybaha is haysta: qaybaha qalabka, isku xirayaasha, iwm;
4. Qalab shaabad gaar ah loogu talagalay aerospace, maraakiibta iyo maraakiibta badda.
Faa'iidooyinka adeegga shaabadda birta ee Ouzhan
Awooda wax soo saar sare iyo qiimaha tartanka.
-Dhammaan alaabooyinka saxan bir saxan sax sax ah waxeey ku xiran tahay baaritaan adag oo tayo leh.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo sameeyo qaybo saxan oo saxan bir saxan.
Hore: Qaybaha birta xaashida qaybo nadiifiya
Xiga: Qalabka birta lagu dhejiyo birta
Albaabka aluminium la safeeyey iyo geedi socodka daaqada ...
6016 aluminium daaweyn daawaha daawaha ah CNC machinin ...